musha Terms uye Conditions
Ndapota verenga Aya Magwaro nematambudziko zvakanyatsonaka. Aya mazwi uye mamiriro ezvinhu anotaura nezvekushandiswa kwehupenyu hweBhostBogger. Zvakakosha kucherechedza kuti hatibvumi kushandiswa kwema RSS feeds yedu pawebsite yega auto inogadzira zviri mukati.
Kuwana kwako uye kushandiswa kwehuwandu hwehupenyu hunoenderana nekugamuchirwa kwako nekuteerera nemitemo iyi. Aya Magwaro anoshandisa kune vose vashanyi.
Nokutsvaga webhusaiti, unobvumirana kusungwa neMirairo iyi.
Basa redu rinogona kunge rine zvibatanidza kune mawebhukiti evechitatu-mapepa kana mabasa asina hurumende kana kutungamirirwa naBoodBogger.
UpenyuBogger hauna hutungamiri, uye hahuna mutoro we, zvinyorwa, marongerwo ehupfumi, kana maitiro ezvesayiti yebasa rechitatu kana masangano. Iwe unowedzera kubvuma uye kubvumirana kuti LifeBogger haisi kuzova nemhosva kana kutongerwa, zvakananga kana kuti zvisina kurongeka, kune chero kukanganisa kana kurasikirwa kwakakonzerwa kana kuti inonzi inokonzerwa kana kana ine chokuita nekushandiswa kana kuvimba pane zvakakanganiswa zvakadaro, zvinhu kana mazano anowanikwa kana kuburikidza chero masayiti akadaro kana masangano.
Isu tinogona kupedza kana kumisa kusvikidzika kweShutano yedu pakarepo, pasina chiziviso chisati chaitika kana chiremera, chero chikonzero chipi nechipi, kusanganisira pasina kuregererwa kana iwe ukaputsa Mitemo.
Zvose zvikamu zveMitemo iyo maitiro avo anofanira kupona kupedzisira zvicharamba zvichiguma, kusanganisira, pasina mumiririri, hutano huripo, warranty disclaimer, chikwereti uye kusagadzikana kwemhosva.
Aya Magwaro achaendeswa nekugadziriswa maererano nemitemo yeNigeria, pasina hanya nemakakatanwa ayo emitemo.
Kana uine mibvunzo pamusoro pemitemo iyi, tapota taura nesu ku lifebogger@gmail.com